6828 responded out of 23929 polled
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဘယ်ဒေသမှာပဲနေနေ၊ ဘယ်လိုဘာသာစကားပဲပြောပြော လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါသလား ?
သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းပြီးလုံခြုံတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုနားလည်ပါသလဲ။
သူငယ်ချင်းနေထိုင်ရာဒေသမှာ ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံစွာ နေနိုင်ပါသလား ?
ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ဒေသ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း၊လုံလုံခြုံခြုံနေနိုင်ဖို့ ဘယ်အရာက အရေးကြီးဆုံးလဲ ?
ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ဒေသ ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံဖို့ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်အရှိဆုံးလို့ထင်ပါသလဲ။
5919 responded out of 6275 polled
232 responded out of 256 polled
5612 responded out of 5716 polled
1424 responded out of 1611 polled
4985 responded out of 5061 polled
91 responded out of 99 polled
3894 responded out of 4378 polled